20 / 02 / 2021 20 / 02 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 566 Views စာ0မှတ်ချက် App ကို, Apple, ချီးမြှင့်, ဆုပေးပွဲ, Duplo, Google Play စ, ကလေးတွေ, Lego, Lego ဒူလို, Lego Duplo ကမ္ဘာ
အဆိုပါ Lego DUPLO WORLD အက်ပလီကေးရှင်းကို ၂၀၂၁ Kidscreen ဆုအတွက်မကြာသေးမီကသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအနိုင်ရသူအားဖယ်ရှားပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ, 2019 အတွက်ဖြန့်ချိ Lego DUPLO WORLD အက်ပလီကေးရှင်းသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂိမ်းများနှင့်အတူသင်ကြားရေးပန်းတိုင်များကိုပြည့်မီစေမည့်ကလေးငယ်များကိုaနှင့်အတူပေးထားသည် Lego DUPLO ထိ နှစ်နှစ်လည်ပတ်ပြီးနောက်ဆော့ဖ်ဝဲသည်ပညာရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုများအတွက်ဆုရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ Kidscreen ဆု Netflix မှကုမ္ပဏီများနှင့်ကလေးများတီဗွီနှင့်ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာများတွင်အကောင်းဆုံးသောပေးဆပ်မှုများကိုပြန်လည်ပြောပြသည် Disney မျိုးစုံအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးအမည်စာရင်းတင်သွင်း။ The Lego အုပ်စုတစ်ခုသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်သင်ယူခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းတွင်သာလျှင်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရပြီးစုဆောင်းမှုထဲသို့ထည့်ရန်အခြားဂုဏ်ပြုခံရခြင်းနှင့်အတူထိုအဖြစ်အပျက်မှထွက်သွားနိုင်ခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ် Touch Press မှအဓိကကျသောအခမ်းအနားများ! ဒီသတင်းကိုမျှဝေရတာကိုကျွန်တော်တို့အရမ်းဂုဏ်ယူတယ် Lego®DUPLO® WORLD သည်အနိုင်ရရှိခဲ့သည် # LicensingAwards2020 အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်း၊ ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (သို့) ဗွီဒီယိုဂိမ်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ် p ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်artနာ့စ် @TheLegoGroup။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @Licensing_Intl! https://t.co/PGUWKWSjnA pic.twitter.com/vNmtEZlYgW
- စာနယ်ဇင်းကိုနှိပ်ပါ (@TouchPress) သြဂုတ်လ 14, 2020
စာနယ်ဇင်းကိုထိပုတ်ပါartနေ Lego အက်ပလီကေးရှင်းအစုအဖွဲ့သည်၎င်းတို့ရရှိခဲ့သည့်နောက်ဆုံးဆုနှင့်အတူအနိုင်ရမှုကိုမှတ်ချက်မပေးရသေးပါ Lego DUPLO စီမံကိန်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများအတွက်လိုင်စင်ချပေးခြင်းကို ၂၀၂၀ တွင်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီရှိလူများသည်သူတို့၏စုပေါင်းခါးပတ်အောက်၌နောက်ထပ်အနိုင်ရရှိမှုကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
Lego DUPLO WORLD ကိုယခု App Store နှင့် Google Play မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ အပိုဆောင်းပေးဆောင်ထားသောအကြောင်းအရာနှင့်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
← အဆိုပါ LEGO Group ၎င်း၏အွန်လိုင်းပြန်ပေါ်လစီ updated ခဲ့သည်
အဆိုပါ Lego Ideas ဂျက်ဇ်ဂီတ Quartet သည် 10K ထောက်ခံသူများအားလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည် →